जनता समाचारमा साेमवार प्रकाशित समाचार सार « Janata Samachar
जनतासमाचार डट्कममा आज (साेमतवार) प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदले कार्यपालिकालाई कहिल्यै असहयोग नगरेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले आफूलाई काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको भन्ने जवाफमा सापकोटाले कार्यपालिकालाई प्रतिनिधि सभाले कुनै असहयोग नगरेको बताउनुभएको हो ।
२.वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्कै संविधान भएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान रहेको बताउनुभएको हो ।
३.गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वैशाख हुने भनिएको निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनको अवस्थामा रहेकाले फैसला हुन ढिला भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने बताउनुभएको हो ।
४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले दाहाल–नेपाल समूहलाई सशर्त पार्टी एकता हुनसक्ने बताउनुभएको छ । पाेखरेलले दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएकाे आरोप पत्र फिर्ता लिने र निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमती भए पार्टी एकता हुने बताउनुभएको हो ।
५.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगत तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरेको बताउनुभएको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रदेश नम्बर २ का नेता कार्यकर्तासँग बाेल्दै समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजीवादी उदारवाद अपनाएका कारण पार्टीमा प्रश्न उठ्दै गएको बताउनुभएको हो ।
६.प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उत्रिएका मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति कृष्ण पहाडीसहित दुई दर्जन मानिस पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आगाडि सोमबार प्रदर्शनमा उत्रिएका दुई दर्जन प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका हुन् ।
७.यो दाजुको मिर्मिरे आँखा, कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरोउ मायालु…लगायतका दर्जनौं लोकगीतका सर्जक अग्रज कलाकार, सारंगीवादक धनबहादुर गन्धर्वको निधन भएको छ । गन्धर्वको पोखराको मनिपाल अस्पतालको आइसीयुमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
८.नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीको समूहलाई धूलो छाप पार्टीको संज्ञा दिनुभएकाे छ । पेरिसडाँडामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओली समूहमा गएका कार्यकर्ता पनि फर्किन थालेकाे बताउँदै धुलाे छाप पार्टीमा काेही नबस्ने बताउनुभएकाे हाे ।
९.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले देशका विभिन्न ठाउँमा सभा र विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको हो । जसअन्तर्गत माघ १३ गते काठमाडौंमा सिट्ठी जुलुस तथा १४ देखि २१ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा संविधान सभा सदस्य, सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको धर्ना लगायत कार्यक्रम तय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।
१०.पहिलो चरणकाे खाेपका लागि जिल्लामा तीन हजार ५ सय ८१ कोरोना भ्याक्सिन (कोभिसिल्ड) आवश्यक पर्ने भएको छ । सरकारी रणनीतिअनुसार पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध अग्रभागमा रहेर काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोप दिन आवश्यक रहेको जिल्लास्थित कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, कमाण्ड पोष्टले जनाएको हो ।
११.चीन २०२० मा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी मुलुक बनेको छ । कोरोना महामारीको उद्गमस्थल भए पनि चीनले सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था युएनसिटिएडीले आइतबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार चीनमा गत वर्ष १ सय ६३ अर्ब अमेरिकी डलर एफडिआई भित्रिएको छ ।
१२.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुपतिनाथ मन्दिरमा संकल्पसहित पूजा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पत्नी राधिका शाक्य र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित आज बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरमा विधिपूर्वक पूजा गर्नुभएको हो ।
१३.निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका कारण राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा भने विभाजित हुने प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहका पदाधिकारीहरुले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेसँगै यो प्रक्रिया लम्बिने भएको हो ।
१४.सोमवार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ छापेका छन् । पत्रिकाहरूमा ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको व्यंग्यको चातर्फी आलोचना, आयोगले मानेन नेकपाको फेरबदल, प्रहरीबाट किन कुटिन्छन् यौनिक अल्पसंख्यक ? र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न लगायतका शीर्षकमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरिएका छन् ।
१५.नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेका बेला भारतले सीमा समस्या सम्बन्धी विवाद नयाँ शर्त तेस्राएको खुलेको छ । भारत सरकार नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न इच्छुक नदेखिएको भारतीय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
१६.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित सवोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतवार पेस गरेको रिट दर्ता भने भएको छैन। प्रक्रिया बाँकी रहेकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१७. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित सवोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतवार पेस गरेको रिट दर्ता भने भएको छैन। प्रक्रिया बाँकी रहेकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१८.सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पर्यटकलाई अनिवार्य गरेको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टको नियम हटाएको छ । यससँगै अब लुक्ला हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई पीसीआरको रिपोर्ट नचाहिने भएको छ । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सगरमाथा पदमार्ग गाउँपालिकाले भदौ १० मा सूचना जारी गर्दै सगरमाथालगायत खुम्बु क्षेत्रका हिमाल आरोहण, पदयात्रासहितका पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुन पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट चाहिने निर्णय गरेको थियो ।
२०. सडक विभागले चक्रपथको विस्तार भइसकेको खण्डमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । विभागले दुई वर्ष पहिले चीन सरकारका आर्थिक सहयोगमा विस्तार भएको कोटेश्वर–कलंकी सडकमा सात स्थानमा बत्ती राख्न लागेको हो ।
२१.अत्तरियाबाट लागूऔषध खैरो हिरोईनसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । लागूऔषध खैरो हिरोईनसहित बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–१ रुद्रश्वरका २८ वर्षीय पुरन कोटारी पक्राउ परेको हुन् ।
२२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले निर्वाचन आयोगले गरेको एउटा निर्णय सही भएको बताउनुभएको छ । नेता भुसालले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य संख्याका बारेमा आयोगले गरेको निर्णय सही भएको बताउनुभएको हो ।
२३.औरही नगरपालिकामा ट्रिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । औरही–४ कठुधार चोकमा ना.८ ख ९८० नम्बरको ट्रिपरले ज.६ प १४०९ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोमबार बिहान ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो ।
२४.नेपालमा थप तीन सय ३९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार आठ सय ५८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा तीन सय ३९ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
२५. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू असफल भए पनि देशलाई असफल हुन नदिने बताउनुभएको छ । दाङमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई साथमा लिएर देश विकास गर्ने बताउनुभएको हो ।
२६.राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ । विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश २ माथि ४ विकेट जित निकाल्दा सोमबार कै अर्को खेलमा एपिएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि ६ रनको जित निकालेपछि जारी प्रतियोगितामा अन्तिम चारमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो ।
ललितपुर । महानगरपालिकाले पाटन दरबार नजिक महापाल क्षेत्रको सडक आजदेखि ‘वान वे’ बनाएको छ ।